izixhobo ezi-8 eziphezulu zokuvula umkhondo wezixhobo
Eyona Qa Izixhobo ezi-8 eziVulekileyo zoMthombo wokuKhangelwa kweBug
Izixhobo ezi-8 eziVulekileyo zoMthombo wokuKhangelwa kweBug
Umthombo ovulekileyo wokuKhangela izixhobo zeBug
Inkqubo yokulandela umkhondo we-bug okanye inkqubo yokulandela umkhondo wesiphene sisicelo sesoftware esigcina umkhondo weengxelo zesoftware ezichaziweyo kwiiprojekthi zophuhliso lwesoftware. Inokuthathwa njengohlobo lwenkqubo yokulandela umkhondo. Apha ngezantsi kukho uluhlu lweeNkqubo eziVulekileyo zokuKhangela iBug.
IBugzilla sisiseko seMozilla esixhaswayo / esiphuhlisiweyo senkqubo yokulandela umkhondo we-bug evumela abasebenzisi bayo ukuba bangene kunye nokulandelela iziphene kwimveliso yabo ngokufanelekileyo. Sisicelo esiqolileyo kwaye sinesityebi esinezinto ezinje ngokukhangela okuqhubekekayo, uluhlu lwebug kwiifomathi ezininzi, iingxelo ezicwangcisiweyo, ukuphinda ubhaqo ngokuzenzekelayo, ukukwazi ukufaka iifayile / ukuguqula iibhugi nge-imeyile, ukulandelela ixesha, inkqubo yesicelo, uncamathiselo lwabucala kunye nezimvo, umbonisi wepatch njl.
Yimveliso ehlengahlengiswe ngokubanzi esetyenziswa ziiprojekhthi zemithombo evulekileyo enkulu njengeLinux Kernel dev iqela, iqela le-Apache dev, iqela le-GNOME dev kunye neenkampani ezithandwayo ezinje ngeOfisi evulekileyo, iNASA, iFacebook njlnjl.
Umntanezulu BT Inkqubo esekwe kwi-bug esekwe kwi-web engagcini nje ngokulandela umkhondo weebugs, kodwa ibandakanya inkqubo yomsebenzisi ukuze abasebenzisi abaninzi banxibelelane kunye neeprojekthi ezininzi ezinokulandelelwa. Isicelo sinempawu ezinjenge-wiki edityanisiweyo, ingxoxo, ukutya kwe-RSS, ukulandelela ixesha, ukudityaniswa kwekhowudi yomthombo, eyakhelwe kwingxelo, izaziso ze-imeyile, izinamathiselo, inkxaso ye-DBMS emininzi, inkxaso yezixhobo eziphathwayo njl.
Kulula ukufaka nokulawula kwaye kungabizi kakhulu kunezinye iisoftware zorhwebo, uMntanezulu lukhetho olucacileyo kuyo nayiphi na inkampani encinci ukuya naphakathi.
I-Trac yinkqubo yewiki eyandisiweyo kunye nenkqubo yokulandela umkhondo yeeprojekthi zophuhliso lwesoftware. Inika ngokulula kwaye kulula ukuyisebenzisa ujongano lwewebhu.
Iimpawu zibandakanya ujongano kuTshintsho (kunye nezinye iinkqubo zolawulo lwenguqulo), amaziko afanelekileyo okunika ingxelo, amanqaku olawulo lweprojekthi kubandakanya imephu yendlela kunye nokulandela umkhondo, ulawulo lomsebenzisi, iwiki kunye nenkxaso yoluhlu lweeplagi. Yinkqubo enobunzima ezinzileyo kwaye elula; nangona kunjalo ungaphulukana nezinye zeempawu eziphambili ezibonelelwe zezinye iinkqubo zokulandela umkhondo we-bug.
Hlaziya kwakhona ngumthombo wasimahla kunye novulekileyo, ulawulo lweprojekthi esekwe kwiwebhu kunye nesixhobo sokulandela umkhondo we-bug. Inikezela ngeempawu zolawulo lweprojekthi ezihlanganisiweyo, ixhasa iiprojekthi ezininzi, ikhuphe umkhondo wenkxaso, inkxaso kukhetho lokulawula uguqulelo oluninzi, indima eguqukayo esekwe kulawulo lokufikelela, ikhalenda kunye neetshathi zeGantt ukunceda ukubonakaliswa kweeprojekthi kunye nemihla ebekiweyo, ukutya kunye nezaziso ze-imeyile, ukulandelela ixesha, iprojekthi Iwiki, iiforamu zeprojekthi njl.nika imveliso etyebileyo ecetyiswayo apho uzinzo lungeyomfuneko ibalulekileyo.
Cela umkhondo lishishini lokwenza itikiti / idesika yoncedo eyenza ukuba iqela labantu likwazi ukulawula imisebenzi, imiba, kunye nezicelo ezifakwe luluntu lwabasebenzisi.
Isetyenziswa ngokubanzi njengenkqubo yedesika yoncedo. I-RT ilawula imisebenzi ephambili enjengokuchonga, ukubeka phambili, ukunikezela, ukusombulula kunye nokwazisa okufunwa zizicelo ezibalulekileyo zeshishini kubandakanya nolawulo lweprojekthi, idesika yoncedo, itikiti le-NOC, i-CRM kunye nophuhliso lwesoftware, ibonelela ngesinxibelelanisi esenziwe ngefowuni ye-iPhone, Android kunye neWebhu OS izixhobo, iideshibhodi kunye nolwalamano lwegrafu, ukuhlelwa kokubhaliweyo okutyebileyo, uphawu olulula kunye nomxholo wesiko.
I-RT ibonelela ngokuguquguquka okuninzi kubasebenzisi bayo okt ngokuyicwangcisa, inokusebenza ngendlela ofuna ukuba isebenze ngayo.
Khuphela isiQinisekiso soCelo
Ifosili yindlela yokuhambisa umkhondo we-bug, ulawulo lwenguqulelo, i-wiki kunye neendlela zebhlog zonke kwiphakheji enye edityanisiweyo. Inendawo eyakhelwe-ngaphakathi kunye nokusebenziseka lula kwiwebhu, ixhasa imo yokuvumelanisa ngokuzenzekelayo, inikwe amandla yi-cgi, ibonelela ngokunxibelelana okulula, isoftware eyomeleleyo nethembekileyo kwaye kulula ukuyisebenzisa nokuhambisa ibhanari enye esebenza kuwo onke amaqonga ungacinga.
I-Php Bug Tracker
I-Php Bug Tracker yi-web-based bug tracker esebenza ngokufana nezinye iinkqubo zokulandela umkhondo, ezinjengeBugzilla. Uyilo lujolise ekwahluleni intetho, usetyenziso, kunye nendawo yolwazi.
I-Php Bug Tracker ilula kwaye kulula ukuyifaka, ukusebenza kunye nokulawula. Uninzi lwamagama anokulungiswa kwisicelo sakho.
Khuphela i-Php Bug Tracker
Umthala s5 vs droid turbo
yecala lomnyele we-s7
I-Apple iPad 8 vs iPad 7: Ngaba kufuneka uphucule? Yintoni umahluko okhoyo?
Ukutshintsha ubuso bakho, kubeke kwi-GIF, kwaye uhleke. Nazi ii -apps ezi-5 ze-iPhone zokuzonwabisa ngokuzonwabisa
Nantsi indlela yokusika, ukunciphisa kunye nokuhlela ingoma kwi-iPhone yakho okanye kwi-iPad ngalo mhleli wesandi sasimahla